Nazi izikhwepha zenu ngosuku: iimvavanyo ezininzi ezifanelekileyo zifumana icandelo lokuqonda lokufunda. Ndiqinisekile ukuba uyayazi loo nto, kodwa xa ungekho, uyamkeleka. Into ongayifumananga kukuba yimiba yokuqonda yokufunda, uya kubizelwa ukuba uphendule imibuzo malunga nenjongo yombhali, kunye nezinye iingcinga ezinjengeengcamango eziphambili , isigama kwiimeko , ukungqinelana kunye nokunye.
Ukuba awukwazi ukuba yintoni injongo yomlobi kuthetha ukuba uya kuba nzima ukuyifumana, na? Ndicinge njalo. Thatha ingqalelo apha ngezantsi ukuze ufunde okungakumbi malunga nekhono lokufunda kunye nendlela onokuyifumana ngayo kula mavesi amaninzi okufunda kwiimvavanyo eziqhelekileyo.
Injongo yoMbhali weNjongo
Injongo yoMbhali Yenjongo
Injongo yombhali ngokuyinene isizathu sokuba wakhetha ukwenza ngendlela ethile, nokuba ngaba ubhala ivesi, ukhetha ibinzana, usebenzisa igama, njl. Ihluke kwiingcamango eziphambili kwinjongo yaloo mbhali kungekhona kufuneka ukuba afumane okanye aqonde; kunoko, yikho isizathu sokuba umlobi athathe ipeni okanye akhethe loo magama kwindawo yokuqala. Kungaba nzima ukunquma ngenxa yokuba, emva koko, ungekho ngaphakathi kwengqondo ukuba umbhali. Awukwazi ngokwenene ukuba kutheni okanye wakhetha ukuquka ibinzana elithile okanye ingcamango ethile. Iindaba ezilungileyo? Ininzi yemibuzo yenjongo yombhali iya kuza kwifomathi ekhethiweyo.
Ngoko awuyi ku funeka ufike ngesizathu sokuziphatha kombhali. Uyakufuna nje ukhetho olukhethekileyo.
Ukuba uzama ukugqiba injongo yombhali kwi-test ehambelana nombuzo, umbuzo wakho ungakhangela into encinane enje:
1. Umbhali unakho ngokubhekiselele kwiNkcitho yokuPhukisa kwiigrafu 33 - 34 ukuya ku:
ukuchonga injongo ephambili yoKhuseleko loLuntu.
Injongo yoMbhali Inqaku eliKhiye
Kukho amagama ambalwa abalulekileyo ahambelana nenjongo yombhali. Amaxesha amaninzi, unokunciphisa oko umbhali wayezama ukukwenza ngokujonga ulwimi alisebenzisa ngalo xa ebhala. Khangela ngamehlo angezantsi. Igama elinesibindi liya kusetyenziswa kwiimpendulo zempendulo. Ibinzana elilandelayo ngamazwi anesibindi yintsingiselo yento ekuthethwa ngayo xa uyibona. Ukuba ucofa kwi "Indlela yokufumana iNjongo yoMbhali" ngezantsi, uya kubona nganye yee binzana ichaze ngokucacileyo ukuze ukwazi ukuqonda ukuba yeyiphi na isetyenziswa kwisimo.
Thelekisa: Umbhali ufuna ukubonisa ukufana phakathi kweengcamango
Ukwahlula: Umbhali ufuna ukubonisa ukungafani phakathi kweengcamango
Ukugxeka: Umbhali wayefuna ukunika uluvo olubi lwengcamango
Chaza / Umzekeliso: Umbhali ufuna ukupenda umfanekiso wesigqibo
Cacisa: Umbhali ufuna ukuphula ingcamango ibe lula
Ukuchonga / Uluhlu: Umbhali ufuna ukuxelela umfundi malunga nembono okanye uluhlu lweengcamango
Ukuqiniswa: Umbhali wayefuna ukwenza ingcamango enkulu
Phakamisa: Umbhali ufuna ukuphakamisa imbono
Ukuba unako ukukwazi abafana ababi, ngoko uya kuba nexesha elilula ukuphendula imibuzo yokufunda yokuqonda kwisicatshulwa sakho esilandelayo, ngokuqhelekileyo kuba amagama angundoqo asetyenziswa rhoqo ngokukhawuleza kule mibuzo! Bonus!
Ngamanye amaxesha, ukufunda injongo yomlobi kuyinto elula njengoko kunjalo; ufunda, kwaye ufumanisa ukuba umbhali wayemthiyile i-Sox ebomvu kwaye wayefuna ukugxeka yonke i-franchise. Ngamanye amaxesha, akulula, ngoko kulungile ukuba nenkqubo yokukukhokela xa ukhangela!
Imisebenzi yeeNgqungquthela zabaFundi beZikolo eziPhakathi
Iindlela ezigqwesileyo zokufumana iTrumppy
Hlangana noMat Maher
Iimpawu zeFilimu zeJimmy Stewart ezingapheliyo